Wararka - Maxay yihiin faa'iidooyinka daaqadaha qolka, gudaha-furitaanka iyo daaqadaha rogan, iyo daaqadaha banaanka loo furayo iyo kuwa kor-sudhan?
Maxay yihiin faa'iidooyinka daaqadaha qolka, gudaha-furitaanka iyo daaqadaha rogan, iyo daaqadaha dibedda u furmaya iyo kuwa kor-sudhan?
Daaqaddu waa marin loogu talagalay nadiifinta hawada iyo iftiinka qolkeenna. Sidaa darteed, waxaan u baahanahay inaan xoogaa yar ka shaqeyno xulashada daaqadaha. Maanta, waxaan ku tusi doonnaa faa'iidooyinka daaqadaha dhinac ka laallaad, daaqadaha gudaha laga furay, iyo daaqadaha dibadda loo laallaaday.
Hawo wanaagsan, hawo-qabasho wanaagsan, daboolida dhawaaqa, ilaalinta kuleylka iyo awood la’aanta. Daaqadaha furitaanka ayaa ku habboon nadiifinta, laakiin waxay qabsanayaan qayb ka mid ah qolka markii laga furo gudaha; kuwa dibedda u furmaya boos ma qabsadaan markii la furo, laakiin furitaanka banaanka wuxuu leeyahay aag weyn oo dabayshu ka hesho. Meelaha qaarkood, waa mamnuuc in la rakibo daaqadaha banaanka ka furan.
Furan gudaha oo ku dhici gudaha:
Waa qaab cusub oo lagu soo saaray aasaaska dariishadaha daaqadaha. Waxaa loo furi karaa laba siyaabood, midkoodna jiq ama u rogi karo (qaybta kore ee daaqada daaqaddu way u janjeersataa gudaha). Markii la rogo, farqi u dhigma toban sintimitir ayaa la furi karaa, taasi micnaheedu waa, daaqadda in yar ayaa laga furi karaa kor, qeybta furanna waxaa lagu hakin karaa hawada waxaana lagu hagaajin karaa daaqada daaqada iyada oo la marsiinayo. Faa'iidadeeda waa: waa la hawo qaadi karaa, laakiin sidoo kale waxay damaanad qaadi kartaa nabadgelyada, biriqda darteed, daaqaddu waxay furi kartaa oo keliya toban sentimitir oo tolmo ah, kama gaari karo bannaanka, gaar ahaan ku habboon in la isticmaalo marka aysan cidna guriga joogin.
Faa'iidooyinka daaqadaha rogan:
1. Ma qabato booska gudihiisa markii la rogo. Daaha waa la furi karaa waana la xiri karaa si xor ah.
2. Carruurtu si xor ah ayey u ciyaari karaan markay hoos u dhacaan. Sidoo kale waad nadiifin kartaa qolka adigoon ka welwelin inaad madaxaaga ama jirkaaga ka boodaan daaqadda geeskeeda.
3. Carruurta cayaarta oo fuula daaqadda daaqaddu khatar uguma jiraan inay ka dhacaan daaqadda.
4. Markaad ku dhacdo gudaha, kaliya xir daaqadda guriga dhexdiisa ka hor intaadan u furin xaaladda fidsan ee fidsan, markaa waa inaanad ka walwalin in tuuggu ka soo galo qolka daaqadda soo socota. Waad furi kartaa dusha sare ee hangarka markaad u baxdo si hawada gudaha u ahaato mid nadiif ah markasta.
5. Qolku si dabiici ah ayuu hawo u leeyahay markii la rogo. Dabayshu waxay ka soo dhacdaa dhinaca daaqadda, si toos ah ugama timaaddo jirka, taasoo kaa dhigeysa inaad dareento raaxo badan.
6. Marka ay jirto neecaw fudud iyo roob yar, dhibcaha roobku waxay ku buufin karaan oo keliya muraayadda, qolka ma geli karaan. Xusuusin saaxiibtinnimo leh: Daaqadaha ha la xidho markay jiraan dabayl culus iyo roob culus!
fur dariishada kore ee ka laadlaada banaanka
Daaqadaha korka ka laadlaada ee korka ka laaban ayaa loo shaqeeyaa iyadoo lagu shaqeynayo qafiska daaqada si loo wado dhaqaaqa u dhigma ee dhaqaaqa qalabka, si daaqada daaqada loogu furi karo si siman ama qolka loogu laaban karo si loo furo xagal cayiman hawo. Adoo wareejinaya daaqada, farsamada qalabka isku xirta ee daaqada gudaheeda waa la wadaa, si daaqada ay u xiran tahay (hoos ugu taag xagga hoose), fidsan fur (xamili toosan), iyo ganaax (kor sare u qaad). Saamayn kuma yeelanayso guriga dhexdiisa waxaana badanaa la isticmaalaa inta badan; waxay si wax ku ool ah u xallin kartaa dhibaatada tuugada ka hortagga, waana ammaan in la furo marka aysan cidna joogin gudaha ama habeenkii.
Astaamaha daaqadaha kor ka laadlaada ee banaanka ka fura:
1. Hawo-siinta Maaddaama booska loo rogay uu yahay qaab kale oo lagu furo daaqadda kore ee korka ka baxsan, waxay u oggolaaneysaa qolka inuu si dabiici ah ugu dhex wareego hawada dabiiciga ah, hawada gudahana waa mid cusub, iyadoo la baabi'inayo suurtagalnimada in biyaha roobku ay galaan qolka. Hawada macaan waxay shaki la'aan abuuri doontaa jawi raaxo leh oo dadku ku noolaadaan.
2. Amniga Qalabka isku xirka ee loo habeeyay daaqada daaqada iyo shaqooyinka kala duwan ee gacanta looga qabto howlaha gudaha. Markuu xirmo daaqadda daaqadda, hareeraheeda ayaa lagu xirayaa daaqadda daaqadda, sidaa darteed amniga iyo waxqabadka la-dagaallanka xatooyada ayaa aad u fiican.
3. Si fudud loo nadiifiyo daaqadaha. Hawlgal fudud iyo isku xirka isku xidhka ayaa ka dhigi kara daaqada daaqada gudaha. Way ku habboon tahay oo ammaan ah in la nadiifiyo dusha sare ee daaqadda.
4. Ku Dhaqan ahaansho Waxay ka fogaanaysaa shaqeynta bannaanka gudihiisa markii daaqadda gudaha laga furo, waana wax aan ku habboonayn in la sudho daahyada oo la rakibo tareenka dharka qaada.
5. Waxqabadka daboolida iyo kuleylka oo wanaagsan Iyadoo loo marayo qufullo badan oo ku wareegsan dhexda daaqada, daweynta iyo saameynta ilaalinta kuleylka ee albaabbada iyo daaqadaha ayaa la hubiyaa.
Waxaa jira faa iidooyin badan oo furitaanka daaqadaha korka ka laadlaada ee banaanka ka furan, hawl fudud iyo ku dhaqmid sare, taas oo si weyn u kordhisa raaxada macaamiisha.